ANDRAVOAHANGY - LAHIANTITRA VOAROBA : Nofatoran’ireo jiolahy teo an-tongo-pandriana
Nifanesisesy indray tato ho ato ato ny resaka vaky trano manodidina ny Fokontanin’Andravoahangy Ambony mihazo an’Ampandrana iny. 20 juillet 2017
Tokantrano maromaro izay no voatafika nanomboka tamin’ny volana jona lasa teo ka hatramin’izao, raha ny tatitra voaray avy eny anivon’ny Fokontany.
Toy ny zava-nitranga tetsy amina tokantrano iray Andravoangy Ambony dia lahiantitra mipetra-drery indray no notafihin’ireo jiolahy, ny talata lasa teo tokony ho tamin’ny roa ora maraina tany ho any. Nofatoran’izy ireo teo an-tongom-pandriana ity rangahy ity nandritra ny fandrobana. Manodidina ny 70 taona eo ity lehilahy ity ary efa mananotena, ka samy tsy eto an-toerana avokoa ny zanany raha ny tatitra ihany. Efa fanintelony no voaroba izy ity ka talanjona ireo mpiara-monina manoloana ny zava-misy.
Toa mampiahiahy mantsy ny fiverimberenan’ny fanafihana ary manahy ireo mpifanolo-bodirindrina fa sao olona eo akaiky eo ihany no manararaotra noho ny fipetrahany irery.Araka ny fanazavana voaray hatrany dia miisa telo teo ireo olon-
dratsy no tonga nanafika, ka nitondra karazana zava-maranitra izy ireo nampihorohoana ity lahiantitra ity. Karazana entana sarobidy toy ny volamena tamin’ny boaty no lasa tamin’izany ary vola tao anaty vata izay tsy voafaritra. Hatreto aloha dia tsy nahitana ratra ny tenany na dia voafatopatotra aza fa ny mampatahotra azy dia ny fiverenan’ny fandrobana amin’ny manaraka indray, ka sao hanaraka hatramin’ny ainy mihitsy. Rehefa vita ny nataon’ireto mpanafika dia nitsoaka izy ireo, ka izay vao afaka niantso vonjy ity lehilahy ity. Nikoropaka ireo mpiara-monina teo am-pandrenesana izany, ka nirohotra nandeha namonjy azy daholo.
Ny fepetra noraisina taorian’izay dia nasaina nalain’ny havana aloha ity rangahy ity hatreto, ka efa misokatra ny fanadihadiana momba ny raharaha amin’izao fotoana izao.